I-Wildland Lodge - I-Airbnb
U-Erik Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ku-Wildland Lodge! Itholakala edolobheni laseCuster, leli khaya elibanzi lokulala eli-2/1.5 lokugezela linendawo efudumele ye-rustic vibe nokukhanya okuningi kwemvelo. Jabulela amadekhi esimweni sezulu esifudumele; yenza iziko lihambe lapho amazinga okushisa ehla. Hlola idolobha ngezinyawo noma uthathe uhambo olufushane uye ezindaweni eziningi eziseduze. Iphethwe yisicishamlilo sendawo yasendle, leli khaya liyindawo ekahle yokujabulela ubuhle bendawo futhi libe isizinda sasekhaya esihle sohambo lwakho lwaseBlack Hills.
Igumbi lokulala elingu-1 elinombhede wendlovukazi (kanye nenketho yombhede oyi-trundle wewele) enegumbi lokugezela elinguhhafu elinamathiselwe.
I-loft evulekile inombhede osayizi ababili endaweni yokulala. Leli gumbi lokulala linefenisha yophahla kanye neyunithi yodonga A.C. yokupholisa.
Igumbi lokulala elingu-1 elinombhede wendlovukazi. Leli gumbi lokulala linefenisha yophahla kanye neyunithi ye-AC ephathekayo yokupholisa.
Igumbi lokugezela eligcwele (elinobhavu).
Igumbi lomndeni elisezingeni eliphezulu linendawo yokubasa izinkuni, i-Smart TV (exhunywe kwi-Netflix), kanye nedlanzana lezincwadi nemidlalo yebhodi.
Igumbi lokudlela linetafula elihle elinendawo yabane, indawo yokudlela yasekuseni eseduze ingahlalisa abanye abantu abathathu. Indawo ilungele ukudla nabangani noma ukumisa ikhompuyutha ephathekayo yakho ephathekayo ukuthi isebenze. Igumbi lokudlela lincikene nekhishi futhi livulekele igumbi lomndeni, ukuze wonke umuntu ahlanganyele ngenkathi edla futhi ephumule.
Ikhishi lihlome kahle ngezitsha eziningi, izinto ezisetshenziswayo ezijwayelekile (ifriji, ifriji, ihhavini, isitofu, umshini wokuwasha izitsha) kanye nenqwaba yezinto eziwusizo zika-countertop (i-slow cooker, i-Instant Pot, i-blender, i-coffee maker, i-microwave, i-toaster). Kukhona izinto eziyisisekelo zokupheka mayelana nezinongo nama-condiments kanye nenqwaba yamabhodwe namapani. Ngohambo olusheshayo lokuya esitolo, ungapheka njengoba usekhaya ngenkathi use-Wildland Lodge.
Idekhi inefenisha kanye ne-gas grill engasetshenziswa izivakashi!
4.85 · 65 okushiwo abanye
Indawo ngokuvamile ithule njengoba izinyamazane namaturkeys edlula njalo. Indlu itholakala enkabeni yedolobha imizuzu emi-5 ukusuka edolobheni laseCuster lapho kunezindawo zokudlela eziningi, izitolo nezitolo. Umtapo wolwazi womphakathi uqhelelene namabhulokhi amabili njengoba kuyichibi ledolobha.
Njengesicishamlilo sasendle, ngingena futhi ngiphuma edolobheni kakhulu phakathi nezinyanga zasehlobo futhi ngingahle ngingabi nayo isevisi yomakhalekhukhwini uma ngingekho eNingizimu Dakota. Nginabo abantu edolobheni abakulungele futhi abazimisele ukusiza izivakashi futhi udadewethu, u-Veronica, utholakala ngefoni, umbhalo, ne-imeyili.
Njengesicishamlilo sasendle, ngingena futhi ngiphuma edolobheni kakhulu phakathi nezinyanga zasehlobo futhi ngingahle ngingabi nayo isevisi yomakhalekhukhwini uma ngingekho eNingiz…